Mudaharaadyo Lagaga soo horjeedo Dadkii Lagu Laayey Degmada Feerfeer Oo Ka Dhacay Gobolka Shabeelle & Madaxweyne Mustafe Oo La Eedeeyey - Jigjiga Online
HomeSomalidaMudaharaadyo Lagaga soo horjeedo Dadkii Lagu Laayey Degmada Feerfeer Oo Ka Dhacay Gobolka Shabeelle & Madaxweyne Mustafe Oo La Eedeeyey
Mudaharaadyo Lagaga soo horjeedo Dadkii Lagu Laayey Degmada Feerfeer Oo Ka Dhacay Gobolka Shabeelle & Madaxweyne Mustafe Oo La Eedeeyey
Goday (JO) – Magaalooyin ka tirsan Gobolka Shabeelle, waxa maanta ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo duullaan ay maleeshiyo beeleed garab ka helayey ciidamada Dawlad Goboleedka Hirshabeelle ee Somaliya kusoo qaadeen Feerfeer, halkaana ku dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Sida ay dad goob-joog ahaa u xaqiijiyeen JigjigaOnline oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay, dadweynaha mudaharaadayey oo iskugu soo baxay dhawr magaalo oo gobolka ah ayaa waxay muujinayeen sida ay uga xun yihiin xasuuqa maleeshiyada iyo ciidamada is-watay ee kasoo tallaabay xuduudka Somaliya ay ka geysteen Feerfeer.
Mudaharaadeyaasha ayaa ku dhawaaqayey ereyo ka dhan ah xukuumadda Dawladda Deegaanka Soomaalida oo ay ku eedaynayeen inay dayacday oo ay ka gaabisay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee ka saarnaa ilaalinta dadka iyo dalkaba.
Waxay si gaar ah mudaharaadeyaashu ugu dhawaaqayeen canaan ku socotay Madaxweyne Mustafe Cagjar oo ay tilmaameen in iyadoo la hayo xogta duullaanka kusoo waajahan Feerfeer uu haddana ka gaabiyey inuu qaado wax tallaabo ah oo lagu sugayo ammaanka iyo nafaha shacabka Feerfeer.
JigjigaOnline oo la hadashay odayaasha iyo indheer-garadka degmada Feefeer ayaa noo xaqiijiyey in ciidamada gaarka ah ee Liyu Police-ku aanay kaliya ka gaabin inay sugaan amniga, laakiin ay maleeshiyaadkaa weerarka ahaa u fududeeyeen inay kasoo tallaabaan xuduudka iyaga oo wata baabuurta dagaalka ee ay dadka ku xasuuqeen.
Warbaahinta JigjigaOnline oo isku dayday inay la xidhiidho xafiiska Nabadgelyada DDS si aanu wax uga weydiino eedaynta odayaasha iyo waxgaradka degmada Feerfeer ayaanay noo suurtogelin.
Dhinaca kale, waxa Degmada Feerfeer tegay hoggaanka nabadgelyada deegaanka oo uu wehelinayo taliyaha ciidamada Liyu Booliska iyo saraakiil ciidamada qaranka Itoobiya ka tirsan.
Toddobaadkan waa mid ka mid ah toddobaadyadii ugu adkaa ee Trump soo mara
Mass demonstration in Gode following the massacre of innocent civilians by a militia crossed from Somalia border